Mareykanka oo Muwaadiniintiisa Ugu Digay in ay Usoo Safraan Soomaliya | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Mareykanka oo Muwaadiniintiisa Ugu Digay in ay Usoo Safraan Soomaliya
Mareykanka oo Muwaadiniintiisa Ugu Digay in ay Usoo Safraan Soomaliya
Waaxda arimaha dibada Mareykanka ayaa ugu digtay muwaadiniinta dalka mareykanka u dhashay in ay usoo safraan gudaha dalka soomaaliya waxaana loo sababeeyay in dalka soomaaliya ay ku baahen weerarda dagaalyahanada xarkada al shabaab iyo in falal dambiyeedyaa ka jira gudaha dalka.
Dagaalyano taabacsan Al-qacida iyo ururka lamagac baxay qilaafada islaamiga ee ISIL ayaa ah kuwa labaduba ka howl gala gudaha dalka soomaaliya waxaana weeraro ay ka fuliyaan magaalada Mogadishu, iyo weeraro qorsheysan oo lagu qaado xarumaha dowlada,Militriy-ga,iyo dilal ka dhan ah shaqsiyaad shacabka katirsan.
Waxaa sidoo kale warkan ka soobaxay waaxda arimaha dibada mareykanka looga digay dadka Ameericaan-ka in ay ka feejignaadaan afduub,qaraxyo,dilal, jid gooyooyin sharci darro ah iyo dhamaan dhacdooyinka rabshada wata ee ka dhaca dalka soomaaliya oo Somalialand ay kujirto, dowlada mareykankana safaarad rasmi ah kuma laha gudaha dalka soomaaliya.
Waxaa si qaas ah warkan ka soo baxay dowlada mareykanka muwaadiniinteeda loogu digay weeraro ka dhaca meelaha dadka badan ay ku kulmaan iyo goobaha ay u badan yihiin dadka reer galbeedka, garoomada diyaaradaha, dakadda,dhismayaasha dowlada,hoteelada,maqaayadaha iyo goobaha laga dukaameesto, halkaa oo qeybo badan kamid ah dhowr jeer ay ka dhaceen weeraro ay fuliyeen dagaalyahano mitidiin ah.
Qatarta dagaalyahanada ayaa ah mid ay halis ah iyagoo fuliyay bombaanooyin lagu xero gawaarida,tuurista hoobiyayaal, iyo is rasaaseen toos ah iyagoo 2 February 2016 laptop lagu dhex qariyay bomb kaa oo lagu weeraray mid kamid ah diyaaradaha ganacsiga.
Dagaalyahanada ISIL ayaa kor u qaaday weerarada ay ka fuliyaan soomaaliya tan iyo 2015-kii waxaana xaruntoodu tahay deegaano dhaca Puntland gaar ahaan dagmada Qandala oo tan iyo 2016-kii fariisan u ah iyagoo dhowr jeer weerararay ciidamada amaanka ee ka howlgala magaalaad Boosaaso waxaana sidoo kale mas’uliyadooda ay sheegteen weeraro ka dhacay deegaanada Puntland iyo xarumo saraakiil katirsan maamulka Puntland ay ku sugnaayeen.
Hay’adda maamulka federalka ee u qaabilsan duulimaadyada ee dowlada mareykanka ee loo soo gaabiyo (FAA) ayaa soo saartay in muwaadiniinta dalkeeda aysan ka ag dhawaan hawada dalka soomaaliya waxaana ay sidoo kale soo saartay digniino iyo ogeysiisyo lagu sugayo amaanka dadka u dhashay dalka mareykanka.
Waxaa muwaadiniita marykanka ay sidoo kale ka ag dhawaan karin xeebaha soomaaliya halkaa oo macquul ay tahay in ay kadhacaan weeraro dooman loo adeegsado iyo falal burcad badeednimo oo biyaha soomaaliya ka dhaca.